Rehefa fametrahana ny antontan-taratasy misy faritra telo manan-danja foana ao an-tsaina:
Karakarao tsara faritra: Izao no haben'ny ny Karakarao tsara pejy haben'ny. Izy io dia ny habe fa ny boky vita dia ho voakarakara to, haavony ary ny halavany ny pejy.
Ra: Izao no faritra izay miitatra any an-dafin'ny Karakarao tsara tsipika. Raha manana fototra, sary na famolavolana singa tianao ra eny ny pejy, dia tsy maintsy manolotra izany amin'ny alalan'ny 1/8 "(3 mm) any an-dafin'ny manamarika Karakarao tsara.
Safe faritra: Tandremo ny vata sy ny sasin-tenin'ny lahatsoratra hita ao amin'ny toerana azo antoka, izay eo amin'ny 1/8 kely indrindra "(3 mm) Karakarao tsara ao amin'ny faritra.
Ny mpanonta mametraka ny nametraka pejy eo amin'ny taratasy, noho izany dia zava-dehibe ny hanorina bleeds rehetra 4 lafin'ny pejy.
Fa tsara indrindra vokatra ny mombamomba ka ilaintsika ny mampihatra ny sary ao amin'ny Photoshop, fa tsy tamin'ny InDesign:
Rehefa manomana ny sary raki-daza amin Photoshop, hifidy avy amin'ny Edit / Hanova ny Profile sy mifidy ny iray amin'ireto manaraka ireto avy amin'ny mampilatsaka menu:
• Fa GRACoL , Adobe Tantarany: mifono GRACoL 2006 (ISO 12647-2: 2004)
• Ho FOGRA mifono, Adobe Tantarany: mifono FOGRA39 (ISO 12647-2: 2004)
• Ho FOGRA uncoated, Adobe mombamomba azy: uncoated FOGRA47 (ISO 12647-2: 2004 )
Avereno jerena ny torolalana ao amin'ity fizarana ity mba hanampiana hanomana ny antontan-taratasy araka izay marina tsara araka izay azo atao. Hanampy mba hisorohana ny fahadisoana mandritra preflight. Raha tsy azonao antoka fa ny raki-daza dia nanangana marina dia mifandraisa ny varotra mpanatanteraka ny torohevitra.
Fampiharana Files nekena:
• Adobe tsary (Tsy mety ho fisehon'ny anaty. Masìna ianao, mametra, mba hamaritana ny zavakanto sy ny antontan-taratasy iray pejy, toy ny Logos, palitao, sns)
• Print vonona pdfs noforonina avy amin'ny fampiharana antontan-taratasy voalaza etsy ambony
Fahazoan-dalana mankany isika fa mampiasa PostScript, OpenType na TrueType endritsoratra. Endritsoratra sasany atao simba nandritra ny fifindran'ny, toy ny mirehitra amin'ny DVD na nampakaranao amin'ny alalan'ny FTP. Dia mampiseho compressing endritsoratra alohan'ny manaiky azy ireo.
Aza mamorona endritsoratra izay tsy manana mpanonta mifanitsy endri-tsoratra. Ohatra, ao amin'ny fisehon'ny fandaharana dia afaka mifidy "Helvetica" ary avy eo dia tsindrio ny "Bold" style satria misy mifandanja "Helvetica Bold" printy endri-tsoratra. Fa raha mifidy "Futura Heavy" ary avy eo mampihatra ny "Bold" fomba izany dia tsy hahazo harisika kokoa dikan 'izany endri-tsoratra satria tsy misy mifanaraka mpanonta endri-tsoratra.
Tsy fahazoan-dalana mankany fa hifidy ny endritsoratra tianao mivantana ao amin'ny endri-tsoratra, fa tsy sakafo fototra fisafidianana ny endri-tsoratra sy ny fampiharana ny fomba. Amin'ny endritsoratra lehibe izay misy vato maro teknika ny farany afaka manao ny valiny ampoizina mihitsy.
Rehefa fametrahana ny endri-tsoratra loko, azafady hitandrina ireo torolalana ao an-tsaina:
8 pt. amin'ny 100% ny mafy loko.
12 pt. amin'ny 60% ny 80% ny loko
16 pt. amin'ny CMYK loko. Kely CMYK endri-tsoratra dia jagged pirinty amin'ny sisiny, ary toa c-format (na eny boky firaketana) satria ny teboka atao pirinty tahaka ny lamba.
Ary nahatratra dia ny fanolorana ny sary na sary amin'ny alalan'ny 0.25pt mba tsy misy fotsy Tazana na hantsana manodidina ny sary na sary. Amin'ny ankapobeny dingana loko tsy mila ny ho voafandrika, na dia misy maningana. InDesign efa preset fandrika toe-javatra, amin'ny ankapobeny tsy mila manahy ary nahatratra.
Tokony ho fantatry ny nahatratra no mandondòna rehefa avy endrika sary na singa avy amin'ny fototra mafy. Misy fomba roa mba tsy Tazana ny fotsy, na izay toa misregistration, amin'ny alalan'ny fampiharana ny marina ary nahatratra na overprinting. Overprinting no hirotsaka ho lahatsoratra na sary, na tsipika manify, fa tadidio fa overprinting dia voatendry hanampy ny loko ny zavatra ho any amin'ny antony, ary mety hisy fiantraikany loko ny zavatra loko.
Raha manana maitso lahatsoratra (c: 95, M: 0, y: 80, K: 0) nipetraka teo amin'ny manga (c: 95, M: 20, y: 10, K: 0) fototra, dia tsy mila fandrika noho ny mafy Cyan fototra Ary raha ny andinin-teny dia 16 pt. na kely dia tokony hametraka ny andinin-teny ho OVERPRINT.
Hi Res sary raki-daza dia tokony ho atolotra ho toy ny tiff, PSD, AI na EPS raki-daza. Ny tena zava-dehibe amin'ny toetra fandikana ny farany file size. Sary rehetra raki-daza dia tokony ho 300 DPI (teboka isaky ny santimetatra) sy ny zavakanto tsipika tokony ho DPI 1200 amin'ny habeny farany.
Ny sary lehibe scanned amin'ny 150 DPI dia functionally mitovy amin'ny sary antsasaky ny habeny izay scanned amin'ny 300 DPI. Samy hiteraka ny rakitra izay mitovitovy mitovy habe.
Rehefa manomana ny sary antontan-taratasy tokony hisambotra ny habetsahan'ny vaovao tsara. Raha toa ny antontan-taratasy kely loatra ka toa Mason'ny na pixelated. Raha lehibe loatra izy ireo dia manao ny asa imagesetter sarotra loatra, na dia mety hiteraka fahadisoana ny PostScript.
Images latsaky ny 300 DPI (na 1200 DPI for tsipika-kanto) dia hahatonga ny fahadisoana nandritra ny dingana preflight. Rehetra hi-Res sary mila ho natsangana ho CMYK, fa tsy mihoatra ny 15% + na -15% ny fandikana habe. Sary alaina avy amin'ny vohikala dia matetika loatra ny fanapahan-kevitra iva-pirinty fandikana. Aza mampiasa andalana ao anatin'ny zavakanto izay thinner noho ny .5 teboka.
Sary rehetra dia tokony ho atolotra ho toy CMYK, fa tsy RGB endrika. Loko rehetra dia tokony ho retouched sy ny loko nanitsy in Photoshop mialoha ny sary ho dehibe ho InDesign.
Raster na bitmap sary dia voarakitra ao amin'ny endriky ny efamira kely eo amin'ny Grid toy ny modely, fantatra amin'ny hoe teboka, hisolo tena sary. Tsirairay bitmap Pixel amin'ny sary dia manana toerana manokana sy ny loko vidiny voatendry ho azy. Ny tena mahazatra no karazana rakitra tiff, EPS na Photoshop PSD raki-daza.
Rehefa manomana sary antontan-taratasy ho an'ny pirinty fandikana tokony hamokatra foana ny tiff sary na PSD raki-daza. Tiff antontan-taratasy dia fahita matetika, ary misokatra endrika, izay midika izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny InDesign na Quark. PSD antontan-taratasy ihany no ampiasaina ao amin'ny Adobe Photoshop fandaharana.
Sary hafa iombonana rakitra dia JPEG. Voalohany indrindra ampiasaina amin'ny sary, JPEG dia iray amin'ireo endrika roa mahazatra rakitra ampiasaina amin'ny aterineto. Izy io dia Compressed endrika vaovao toy izany dia very nandritra ny famatrarana. Raha manana JPEG rakitra tianao hampiasaina amin'ny pirinty, sokafy izany amin'ny Photoshop sy mifidy: Image-> Mode-> CMYK Color (na Grayscale).
Tena OK ny resample avy amin'ny sary lehibe iray ho kelikely kokoa. Photoshop fotsiny fanampiny Niantoraka ny teboka sy sary kely kokoa ary hiseho ho maranitra kely rehetra toy ny teo aloha.
Tsy hisy mihitsy izany hevitra tsara upsample avy amin'ny sary kely iray ho lehibe kokoa. Amin'ny toe-javatra io, manampy teboka Photoshop ny sary. Ny fandaharana manendry loko ireo teboka vaovao miorina amin'ny loko ny manodidina teboka. Izany dia mety hiafara amin'ny iray idina izay tsy blurrier noho ny tany am-boalohany, araka ny hita any amin'ny tsara.
Aza manaiky sary GIF raki-daza ho an'ny famokarana pirinty.
Mainty sy fotsy Images
Arakaraka ny tetikasa, dia afaka nanangana ny sary ho toy ny 1 miloko mainty sy fotsy, duotones, na 4 loko CMYK sary.
1 loko mainty sy ny fotsy sary no nanangana ankapobeny dia mampiasa dingana mainty. Zava-nisongadina sy tandindona no nanangana in grayscale.
2 loko mainty sy fotsy ny sary no nanangana mampiasa dingana mainty sy pms loko. Ny loko pms azo ampiasaina mba hampihatra ny Sepia pms loko na fotsy Andaminana tsipiriany ao amin'ny grayscalefrom hevitra misongadina ny aloka.
4 loko mainty sy ny fotsy dia nohariana mampiasa CMYK sy manome ny antsipirihany avy amin'ny misongadina indrindra amin'ny aloka. 4 miloko mainty sy fotsy ny sary mitaky mihantahanta indrindra mandanjalanja. Rehefa fametrahana ny antontan-taratasy, tsy maintsy ho azo antoka fa tsy misy loko nandatsahany tao amin'ny sary. Tsy maintsy hanafoana ny nandatsaka Photoshop teo anoloan'ny sary dia dehibe ho InDesign.
Output rehetra fanoharana ny Vector raki-daza toy ny EPS na AI (sary). Aza adino ny mitovy ny loko anarana ao amin'ireo antontan-taratasy ny anaran'ny mitovy loko eo amin'ny fisehon'ny rindrambaiko.
Misy dikan-Adobe tsary mamela anao hanangana na ambany Adobe tsary ny toerana misy anao output fanapahan-kevitra. Aza hanitsy izany toe-javatra. Fampidinana ny fanapahan-kevitra hiteraka zara raha namorona lalana. Mitaiza dia mety hanome fahadisoana tsy ilaina mandritra ny preflight.
Vonjeo tsipika zavakanto antontan-taratasy toy ny bitmapped sary. Raha namonjy azy grayscale, ny sisiny mety Output amin'ny lamba halftone manao toa azy ireo na jagged Mason'ny.
Amin'ny alalan'ny fampiasana Black Ink Solids
Raha misy faritra lehibe ny ventin-mainty no niampita hafa nanao tints, dia hisy fahasamihafana eo amin'ny hakitroky eo amin'ny faritra ny loko sy ireo izay tsy ny loko. Ny vahaolana dia ny hanorina "manan-karena mainty" Tint mifangaro toy izao manaraka izao:
Mampiasa izany manan-karena dia tsy misy mainty mazava hakitroky fiovana mainty solids. Izany ihany koa ny raiki-pohy tsara ny mamokatra ny matevina, fanamiana Morona mainty matevina, na dia tsy ho miampita hafa loko.
Mainty singa hafa toy ny fitsipika, karazana, ary manify fanoharana singa tokony ho niakatra 100% mainty sy nametraka ny overprint.
Diniho manampy varnish amin'ny pejy izay matanjaka maizina miatrika loko fotsy pejy mba hisorohana Niainga.
Fanafahana ny Project
Alohan'ny manaiky ny raki-daza, azafady mampiasa ny Preflight didy in InDesign hijery ny raki-daza.
• ihany sary izay ampiasaina ao ny fisehon'ny. Ataovy azo antoka ny anarana sy ny antontan-taratasy mifandray toerana tsy miova manenjika anareo Aho hanangona ny raki-daza.
• bitmapped sary habe rehetra dia tokony ho 300, fara fahakeliny, DPI, ary tsipika zavakanto rehetra vectorielle antontan-taratasy, fara fahakeliny, tokony ho 1200 DPI
• ny tiff, ary EPS antontan-taratasy tokony ho CMYK, fa tsy RGB. Ny sary toy ny tiff, ary tsipika vectorielle rehetra zavakanto toy ny EPS.
• Asio rehetra endritsoratra ampiasaina, miaraka amin'ny ny mifanaraka endritsoratra pirinty, na dia ny endri-tsoratra no ampiasaina matetika.
• Esory ny loko maromaro. InDesign faritra, ny loko dia manana "Select miasa rehetra" safidy izay hanampy anao ny toerana sy hamafa ireo swatches.
• Ataovy azo antoka tsirairay loko iray ihany no tena anarany.
• Tsory ny sary mba hampiasa ny isan'ny dingana kely indrindra ao amin'ny mifangaro, na ny kely indrindra isan'ny teboka eo amin'ny lalana.
• Ataovy azo antoka Photoshop antontan-taratasy tsy ahitana na miafina sosona maromaro. Raha tsy izany, handrovitra fahadisoana mety hitranga sy ny miafina sosona mety Output sy mamorona vokatra tsy ampoizina.
• Esory singa maromaro ao amin'ny pasteboard na singa izay miafina tanteraka ny zavatra hafa.
• Ny pejy rehetra dia tokony hanana trims sy bleeds (bleeds tokony hanitatra ny 3mm na 1/4 "any an-dafin'ny Karakarao tsara rehetra lafiny 4).
• Ampidiro ambany Res pdfs ho an'ny fametrahana sy / na tamin'ny laser amin'ny taratasy vita pirinty. Soraty ny pejy maro ao amin'ny lasers folios raha toa ka tsy pirinty na ambany Res pdfs ho an'ny fametrahana.
• Ampidiro miavaka fampiharana na PDF antontan-taratasy ho an'ny Lahatsoratra sy rakotra fanaovam-panavotana, tranga hafa singa (endpapers, mamatotra, sns)
• Color tari-dalana, raha manome.
Afaka mametraka ny antontan-taratasy amin'ny alalan'ny wetransfer, Hightail na antontan-taratasy hafa amin'ny aterineto mizara fandaharana, na azo entina fiara (ho azo antoka mba hampidirana ny telegrama mba mifandray amin'ny solosaina). Submit InDesing na hi-Res pirinty vonona pdfs amin'ny Karakarao tsara marika sy bleeds tafiditra.
Fa tsipiriany fanampiny momba ny fomba hanangana pdfs, tsidiho ny Adobe fanampiana toerana: https://helpx.adobe.com/indesign/how-to/indesign-create-pdf-for-print.html?set=indesign-get -started-manan-danja-beginners